Akkatti konsartii “Biifolee dhiichisaa jirruttu jiraa. Warri dhufa jirtaniis asumaa fiiga. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAkkatti konsartii “Biifolee dhiichisaa jirruttu jiraa. Warri dhufa jirtaniis asumaa fiiga.
#Akkatti konsartii “Biifolee dhiichisaa jirruttu jiraa. Warri dhufa jirtaniis asumaa fiiga.
#Agarsiisaa shubbisaa kan leenjisaa kiroogirafeera #Alamayyoo dhabii ..waltajjii #konsartii_Biifoleen bifee irratti #Qeerransoo qeerransaa oromoo …akkasitti gammachiisuun itti fufa..